ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ကြာမြင့်စွာကတည်းက porn ကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစမ်းသပ်မှု - Your Brain On Porn
ငါ ၁၂ နှစ်မှာ porn ကိုစခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်လိင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုသည်လိင်မှုကိစ္စမဟုတ်သောညစ်ညမ်းမှု၏အကူအညီဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောရုပ်ပုံသည်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုသိရှိခဲ့သည်။ Porn ကကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုနည်းလမ်းများစွာနဲ့လိမ်ခဲ့တယ်၊ ငါကသက်သေပြနိုင်တဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်လုပ်ခဲ့လို့ဒါက porn လို့သေချာတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကို ၂ နှစ်ခွဲလောက်ကြာအောင်မကြည့်တော့တဲ့အတွက်သဘာဝကသူတို့အလုပ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအများစုကိုငါ့ ဦး နှောက်ကစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ အရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုငါတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ ယခုငါပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ငါ့ ဦး နှောက်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ခံစားချက်ကကြီးတယ်
ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို Porn Reality (PR) ဟူ၍ ခွဲခြားပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်ယခင်ကဟောင်းနွမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်း၊ porn ၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့် Normal Reality (NR) - ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်သည်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်သဘာဝတရားအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေရာဖြစ်သည် လုပ်တယ်
ငါပြောချင်တာကငါ့အတွက်သာမှန်သည်ဟု ထပ်၍ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာလူတိုင်းမစတင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်လူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိမှာသေချာပါတယ်။ ဦး နှောက်ထဲကငါ့ညစ်ညမ်းကွန်ယက်ကပိုများပြီးအခြားကွန်ယက်တွေထက်biggerရိယာတွေပိုကြီးလာနိုင်တယ်။ ။
ယခုငါပြန်ချိန်ခွင်လျှာခဲ့ကြောင်း, ငါသိပ်ဂရုတစိုက် PR စနစ်တာဝန်ခံကြာလာသောအခါငါ၏အအဖြစ်မှန်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သောတစ်ခုတည်းသောပြောင်းလဲမှုကိုစောငျ့ရှောကျချင်တယ်။ ငါရိုးရှင်းစွာငါ porn ၏အမှတ်တရများကို အသုံးပြု. masturbated စမ်းသပ်မှုလုပ်ရန်။ ဒါဟာနီးပါးအစစ်အမှန်အရာကိုစောင့်ကြည့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ဒါကြောင့်ကျနော်အလုံအလောအောက်မေ့တော်မူ၏။ (ဟုတ်ပါတယ်ကြောင့်လျော့နည်းပျက်စီးစေနှင့်အစစ်အမှန်လှုံ့ဆော်မှုမပါဘဲဘေးကင်းခဲ့ပါတယ်) ။
ကျွန်တော်သတိထားမိသည်မှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်နေခြင်းထက်ရိုးရှင်းသောအချက်မှာကျွန်ုပ် ဦး နှောက်မှအခြားလိင်ကွန်ယက်ကိုပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလှည့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါခံစားမှုရုံကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်လေ့လာခြင်း၊ orgasm ကိုရောက်ရှိခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် orgasm ကိုရောက်ရှိခြင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်ဒေသများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေကြောင်းကျွန်ုပ်သေချာပေါက်နီးပါးသေချာသည်။ လုပ်ရပ်နှစ်ခုလုံးသည်အချို့သောအသုံးများသော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အချို့သောအခြေခံလုပ်ဆောင်မှုများကိုသုံးကောင်းသုံးလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကွန်ယက်အချို့ကိုအသုံးပြုသည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီတွင်သင်သည်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိသော်လည်း၊ သင်သည်ဤအော်ဂဇင်ကိုမတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိပြီး ဦး နှောက်ကိုကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်စေသည်။
သငျသညျကိုသာစောင့်အခြားတစ်စုံတစ်ယောက်လိင်ဆက်ဆံရာမှစိတ်လှုပ်ရှားရသင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဘဝမယ်ဆိုရင်ဒါ, ဤလှုပ်ရှားမှုအစစ်အမှန်လိင်ဆက်ဆံရာမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကွန်ရက်များတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ orgasm ကွဲပြားခြားနားဖြစ်သွားကြသည်နှင့်ခြုံငုံခံစားမှုကွဲပြားခြားနားဖြစ်သွားသည်။ Plus အားသင်သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ရန်သင့် voyeur ဗီဇဖွံ့ဖြိုး။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်လာသည်။
နောက်မှ၊ စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်တိုင်၊ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုကွန်ယက် (သင်လေ့လာရန်မထင်ထားသောနေရာ) နှင့်ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့်သင်သည်လိင်စိတ်နိုးထကွန်ယက်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ သာမန်လိင်ဆက်ဆံမှုကွန်ယက်သည်သူလုပ်ရမည့်နည်းလမ်းအတိုင်းအလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သွေဖည်သောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ဆိုးသည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားပုံမှန်အားဖြင့်သင်ရရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်လိင်မှုကိစ္စကိုအမြင့်ဆုံးအဖြစ်မြင်ယောင်ကြည့်တဲ့အခါငါ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုမှာငါဟာတခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုလိင်ဆက်ဆံတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့လမ်းအတွက်သော်လည်း, နေဆဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ adrenaline အလုအယက်ခံစားရတယ်ငါအရမ်းတက်ကြွခြင်းနှင့်စေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏ ဦး နှောက်က၎င်း၏ယခင်တုံ့ပြန်မှုပြန်ပြောပြခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ abstinence ပြီးနောက်ဘိန်းဖြူထိုးတာနဲ့တူတယ်။ “ ငါဒီထက်ပိုပြီးလိုအပ်တယ်” လို့လည်းခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာလိင်ကိစ္စမှခံစားရတဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ဘဲသင်ပိုမိုမရရှိပါကသင့်အားစိုးရိမ်ပူပန်စေသည်။
ငါပြီးတာနဲ့ငါအခြားအရာတစ်ခုခုသတိပြုမိ: ငါမဆိုစစ်မှန်တဲ့ကျေနပ်မှုမရကြဘူး။ ဒါဟာထူးဆန်းခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြင်းထန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စိတ်ကျေနပ်မှုသည် ဦး နှောက်တွင်အလုပ်လုပ်ပုံသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ ပြင်းထန်တဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်ရုံသက်သက်ထက်ပိုပါတယ်။ ကျေနပ်ရောင့်ရဲမည့်အစားငါပြီးဆုံးသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည် ပို၍ လိုအပ်သည်။ ဒါဟာမလုံလောက်ဘူး ငါလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်, ငါအေးဆေးတည်ငြိမ်နှင့်အပန်းဖြေ၏ခံစားချက်မခံစားရဘူး။ ငါကပိုလိုချင်တယ်။ ငါသည်အခြားလိင်ဆက်ဆံသူများ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်း) ကိုအမှန်တကယ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘဲကြည့်ရှုခြင်းမှနှိုးဆော်လိုသည်။ ငါ့ကိုများသောအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံချင်တဲ့စေတဲ့ကွန်ရက်ကမလှုပ်ရှားဘူး။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလုပ်ခြင်း၏အစား (ကြည့်ရှုရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကဲ့သို့) ကြည့်ရှုချင်တယ်။
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, ငါ့ porn အဖြစ်မှန် (PR စနစ်) အပြည့်အဝ activated ခဲ့သည်။ အခုတော့ကိုယ့်ဦးနှောက်ကိုထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်အတွက်ပူဇော်ခဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်မှဂရုတစိုက်စောင့်ခြင်းငှာချင်တယ်။ ငါ၏အညစ်ညမ်း-အဖြစ်မှန်စမ်းသပ်မှုအားလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ပါတ်အတွက်အပြည့်အဝသှားကွ၏။ ကြောင်းရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာတော့, ဒီမှာငါကပုံမှန်အဖြစ်မှန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကွဲပြားခြားနားခဲ့တာသတိထားမိတယျ။
ငါ၏အစမ်းသပ်မှုပြီးနောက်, ငါတစ်ခုလုံးကိုနေ့ကစိုးရိမ်ပူပန်သလိုခံစားရတယ်။ ကျပန်းညစ်ညမ်းပုံနဲ့မြင်ကွင်းများ့စိတျထဲတှငျထပြသခဲ့သည်။ ငါကျော်လုံးဝထိန်းချုပ်ခဲ့; ဒါဟာအလိုအလျောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုလုံးဝသွားကြောင်း !! ငါစက်ရုပ်လိုခံစားရတယ် များသောအားဖြင့် Normal reality (NR) ၌ကျွန်ုပ်စန္ဒရားရှေ့ထိုင်ပြီးကစားသည်။ ငါကြံဆတီထွင်မှုနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ငါစန္ဒရားရှေ့မှာထိုင်ရုံကြည့် ... တစ် ဦး အချည်းနှီးသောကြည့်။ ငါမှတ်ဉာဏ်ထဲကတချို့အသံတွေကိုတီးခတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကငါဘာမှမဖန်တီးနိုင်ဘူး။ အသစ်သောအရာများဖန်တီးရန်တာ ၀ န်ရှိသော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုများသည်အလုပ်မလုပ်သေးပါ။
ငါအက်ဆေးရေးသားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါဟာအကြွင်းမဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ NR ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွေးတွေဟာချောချောမွေ့မွေ့ပဲပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ပိတ်ဆို့ခံထားရသလိုပါပဲ PR ကလည်းရယ်စရာပြက်ရယ်ပြုခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုရယ်စေခြင်းစသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ငါအရမ်းတော်တယ်။ ဒါဟာအလိုအလျောက်ဖြစ်သွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါကလူတွေအများကြီးရှိတုန်းကထူးဆန်းနေတယ်။ ငါအဖြစ်မှန်အခြားလမ်းအတွက်ရိပ်မိ၏။ ငါသိမ်မွေ့သောအရာတို့ကိုမခံစားရဘူး။ ငါအခြေအနေများအနေဖြင့်မည်သည့်ဟာသဖန်တီးနိုင်ဘူး။ ငါကျပန်းဟာသ crack နိုင်ဘူး။ တစ်ခုခုပျောက်နေတယ် ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကကျွန်ုပ်ကိုရယ်စရာဖြစ်စေရန်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်မှသတင်းအချက်အလက်အလုံအလောက်မရရှိခဲ့ပါ။
ရှုပ်ထွေးတဲ့သင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemsနာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းအလွန်နည်းပါးတယ်။ NR မှာ၊ ငါနဲ့ဘာမှပြproblemsနာမရှိဘူး ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏စာသားကိုဖတ်နိုင်ခြင်း၊ အရာအားလုံးကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း၊ ကောင်းစွာမှတ်မိခြင်း၊ ငါမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ငါကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် NR ထက် ၅၀% ပိုဆိုးတယ်။ အကြှနျုပျ၏မှတ်ဉာဏ်အသေးစိတ်ကိုကျော်သွားခဲ့သည်; ငါ့အာရုံစာသားကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်; ထိုသို့အားလုံးငါ့ထိန်းချုပ်မှုထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဘာသာစကားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြနိုင်စွမ်းကအားနည်းနေတယ်။ NR မှာတော့ငါကတော်တော်လေးစကားပြောပြီးငါကတခြားလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ငါစကားပြောဆိုမှုစတင်; တခြားသူတွေရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုငါကြားချင်တယ်။ ငါအများကြီးစကားပြော ငါနားလည်တယ်။ ငါအကူအညီပေးနှင့်ကအကြောင်းကိုခံစားမိနိုင်ပါတယ်။
PR … sheesh တွင်ကျွန်ုပ်သည်f** k ကဲ့သို့စကားမပြောနိုင်ပါ။ ဤကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီ ငါအဲဒီမှာရပ်တယ်။ တခြားသူတွေပြောတာကိုငါကြားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါစိတ်မဝင်စားဘူး။ စကားလုံးတွေကိုငါကြားတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့စကားလုံးတွေကသူတို့လုပ်သင့်တဲ့ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမလှုပ်ရှားဘူး။ သူတို့စကားသည်နံရံပေါ်သို့တက်သွားသကဲ့သို့ဖြစ်သည် ငါအရမ်းတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖြစ်လာတယ် ငါကတခြားသူတွေကိုဂရုမစိုက်ဘူး ငါစကားမပြောချင်ဘူး ငါဆက်သွယ်ရေးကနေပျော်မွေ့ဘူး။ ငါစကားပြောတဲ့အခါငါပြုံးဘူး။ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုနားလည်စေရန်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်ပြန်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဝေးကွာနေခြင်း၊
PR တွင်အမျိုးသမီးများသည်ကျွန်ုပ်အားပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်သည့်အရာတစ်ခုအဖြစ် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုများကိုသက်သာစေနိုင်သည့်အသားများပြောခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သူတို့ကိုငါမသိစေချင်ဘူး၊ သူတို့ကိုစကားတောင်မပြောချင်ဘူး။ ငါဆွဲဆောင်ခံရတဲ့အခါငါချက်ချင်းပဲလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ ကိုယ့်သူမကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေလုံးဝအမျိုးသမီးတွေကြည့်ရှုကြ၏။ PR တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးကိုမိန်းကလေးများသာမကသူငယ်ချင်းများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်သော်လည်းကောင်းပုံမှန်တွေ့ကြုံခံစားခြင်းမရှိပါ။
တစ်မ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, PR စနစ်၌ငါ porn မှလွဲ. ဘာမှထံမှစစ်မှန်သောအပျော်အပါးမခံစားရနိုင်ပါတယ် (အပျြောအပါးမူးယစ်ဆေးကဲ့သို့ထက်အစစ်အမှန်သည်အဘယ်မှာရှိ) ။ များသောအားဖြင့်နှစ်သိမ့်ပေးအတော်များများကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြီးအကျယ်နှိမ်နင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမသန်စွမ်းခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ၏အစွမ်းရည်, ဦးစားပေးအာရုံစိုက်, စုစည်း, အစီအစဉ်, ငါ့စိတ်ခံစားမှုကိုနားလည်နှင့် sort, စိတ်ဖိစီးမှုအောက်တွင်အလုပ်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ဆုနဲ့လှုံ့ဆော်မှုစနစ်ကဒီဟာအားလုံးလည်ပတ်နေရင်မှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်မှုမရှိဘူး၊ ဒါကငါတို့ဘ ၀ မှာအောင်မြင်ဖို့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအကျဆုံးအချက်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေက porn စမ်းသပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာသေချာတယ်၊ မကြာခင်မှာပဲဒီဆုနဲ့လှုံ့ဆော်မှုစနစ်ကပြန်ပြောင်းလဲအလုပ်လုပ်လာလို့ပါ။
PR စနစ်တွင်သုံးသောအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဗလာကျင်းဖြစ်နေသည်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲမှာအခိုးအငွေ့တွေရှိနေသလိုခံစားရတယ်၊ တစ်ခုခုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တောင်တစ်ခုခုကအမြဲတမ်းနိုးကြားနေတယ်။ ဒါဟာမျှော်လင့်ချက်အတွက် ဦး နှောက်ထဲမှာယန္တရားနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ ငါ "ထိုး" လက်ခံရရှိယခုငါ့ ဦး နှောက်နိုးနိုးကြားကြားနှင့်ပိုပြီးစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်။ ဒီလိုမျှော်လင့်ခြင်းကကျွန်တော့်ကို ၃ ရက်ကြာစောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။
ညစ်ညမ်းသောအမှတ်တရများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းပြီးနောက်ငါးရက်မြောက်နေ့တွင် PR သည်ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြောသည်။ “ အိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးပါပဲ!” (ငါဘုရားမဲ့ဝါဒီပါ။ ) နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကဖြေလျော့ပြီးလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာပြီ။ ငါအသက်ပြင်းပြင်းရှူမိပြီးအဲဒါကိုလုပ်ခြင်းကနေပျော်ရွှင်မှုခံစားရတယ်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်တယ် ၃ ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်မရဲ့ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ၁၀၀% ပြန်ရခဲ့တယ်။
Porn လက်တွေ့ဘဝထဲမှာလိင်နှင့်ပုံမှန် Reality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များ:
PR စနစ်လိင် - ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုလုံးလုံးအာရုံစိုက်သည်။ အရာအားလုံးအလွန်အမြင်အာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ မိန်းမသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောအရာတစ်ခုနှင့်တူသည်။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ခံစားချက်သည်ထူးဆန်းသည်၊ NR ရှိခံစားချက်နှင့်မတူပါ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဝါးခံစားမှုတစ်ခုလိုပါပဲ ငါခံစားရသည်မှာပြင်းထန်သောစွမ်းအင်သာဖြစ်ပြီးဖြန့်ချိရန်လိုအပ်သည်။ အခွားသောအာရုံနီးပါးပိတ်ဆို့နေကြသည်။ လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ရပ်တစ်ခုလုံးသည်အဓိကအားဖြင့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ငါကပိုချင်တယ်။ ငါစိတ်ကျေနပ်မှုလုံးဝမရှိဘူး၊
ရော်ဘာလိင် - ထိုလူကိုငါအာရုံစိုက်သည်။ ငါအမြင်အာရုံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်လျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်။ ငါမိန်းမနှင့်ကွဲပြားခြားနားခံစားရတယ် ငါဖလှယ်တိုင်းတစ်ခုတည်းနူးညံ့သောထိတွေ့ပျော်မွေ့။ ငါအရမ်းစိတ်ရှည်တယ် ငါယခုအချိန်တွင်ပျော်မွေ့။ ငါစက္ကန့်တိုင်းအေးဆေးတည်ငြိမ်ခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏အာရုံပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုပွင့်လင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါအော်ဂဇင်ကိုမရောက်ချင်ပေမယ့်လုပ်ရပ်တစ်ခုလုံးနဲ့ခံစားချက်ကောင်းတွေကိုခံစားချင်တယ်။ PR တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောခံစားချက်ကင်းမဲ့နေသည်။ လိင်မှုကိစ္စတစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်သည် PR တွင်မမြင်နိုင်သော၊ မပျော်နိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ငါ့အာရုံကပိုပွင့်လင်းတယ်။ ငါစိတ်မပူပါဘူး ပြီးရင်ကျေနပ်ရော၊
ငါ porn ရပ်တန့်အကြောင်းကို 14 ၏အသက်အရွယ်ကနေသည်အထိကျွန်မ PR စနစ်၌ရှိ၏။ ဤသူသည်ငါအလွန်မသန်မစွမ်းခဲ့လျှင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်အခြေအနေများကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု-တစ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အကြှနျုပျ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးနှင့်ဘဝဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုမှားယွင်းတဲ့စိတ်ကူးများအများကြီး, စတာတွေအများကြီးစေ၏။ ငါသည်ဤဇာတ်လမ်း porn များအတွက်ဒါပေမယ့်ဘာပဲစွဲအဘို့မသာတရားဝင်လိမ့်မည်သံသယရှိကြသည်။
ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်မသန်စွမ်းသူဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အမျိုးသမီးများ, လိင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးငါ၏သညာ, အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်အတူ, တစ်ဖွဲ့လုံးကအမှန်တကယ်အရာအားလုံးနှင့်ငါ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသာမန်ကြဘူး။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ငါ့အဘို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ငါမကျန်းမာခင်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများ၏ဖြစ်နိုင်ချေလက္ခဏာများကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်လုံးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စစ်မှန်သောလိင်၌သာလျှင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ OCD၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အရာတော်တော်များများကိုအလိုဆန္ဒမရှိခြင်းနှင့်ကတည်းကပျောက်ကွယ်သွားသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းအရသာ။ ငါပြန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှအရာအားလုံးကိုသင်ယူရတော့မယ်၊ ကျွန်မဟာကမ္ဘာကိုစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုအသက် ၂၀ အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်လို။ ဒါနာကျင်မှုပါပဲ
ငါနုခံစားခဲ့ရနှင့်ငါ့စွဲစတင်ခဲ့သည့်အခါအသက်အရွယ်မှာညပ်။ အခုတော့ရှိသမျှတို့ကိုငါလက်ျာဘက်များနှင့်ရင့်ကျက်ခံစားရတယ်။ ငါ့ကိုငါရင့်ကျက်စဉ်းစားပါအခြားလူများအကြားမပါကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ ငါသို့သော်ကြောင့်အောင်မြင်ရန်3နှစ်ပေါင်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ porn ရပ်တန့်ငါ့အဘို့ကိုယ့်အစအဦး, ကကူညီပေးခဲ့သောအရာများစွာကိုရုံတစျခုဖွစျသညျ။ ငါသည်လည်းငါကလူအများကြီးနှင့်အတူရှိ၏ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ အသင်းအလုပျ၏တစ်ဦးကအများကြီးလိုအပ်နှင့် non-stop စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ လူတို့နှင့်အတူအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ရေးပြုသကဲ့သို့အကြောင်း, အများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။ ရည်းစားရှိခြင်းကိုလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်။
သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်သင်၏အသက်တာတွင်ညစ်ညမ်းစတင်ခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ဟာစွဲလမ်းဦးနှောက်၏အမျိုးအစားနှင့်အမာခံဆွဖို့ဒါမှအထိခိုက်မခံမဖြစ်လျှင်, သက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အန္တရာယ်နည်းပါးပေမည်။ သို့သော်ဤငါ၏အတှေ့အကွုံမြားခဲ့သည်။